Park Rangers 12 novonoina tamin'ny fanafihana mahafaty ny UNESCO World Heritage Site
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Park Rangers 12 novonoina tamin'ny fanafihana mahafaty ny UNESCO World Heritage Site
Aprily 25, 2020
Valan-javaboary Virunga dia UNESCO World Heritage Site ao amin'ny Repoblika Demokratika Atsinanana Kongo. Izy io dia fantatra amin'ny anarana hoe faritra afrikanina tranainy indrindra sy arovana biolojika.
Androany dia nampihorohoro ny valan-javaboary. Iray amin'ireo fanafihana nahafaty olona indrindra tao amin'ny valan-javaboary, faritra arovana tranainy indrindra sy arakaraka ny biolojika.
Nikatona ny valan-javaboary tamin'ny volana martsa nifanaraka tamin'ny torolàlana WHO nanantena ny hanohy ny asany ny fizahan-tany amin'ny 1 jona ny manampahefana saingy amin'ny tranga farany niseho dia tsy azo inoana izany. Ery dia fanafihana toy izany koa roa taona lasa izay lasa izay nahafatesan'ny mpiambina iray rehefa niaraka tamin'ny mpizahatany anglisy.
Ankoatry ny mpiambina valan-javaboary 12, mpamily iray sy sivily efatra hafa no maty tamin'ny fanafihana tao Goma, izay tsy nisy olona na vondrona nitaky andraikitra, hoy ny governoran'ny faritanin'i Nord Kivu.
Ity fanambarana manaraka ity dia navoakan'ny manam-pahefana Park androany maraina.
Amin'ny alahelo lehibe no nanamafisan'ny Valan-javaboary Virunga, fa ny zoma dia nisy fanafihana lehibe nataon'ny vondrona mitam-piadiana teny akaikin'ny Village Rumangabo izay niafara tamin'ny famoizana ain'olona be loatra.
Anisan'izany ireo sivily, mpiasan'ny Virunga, ary Virunga Park Rangers. Amin'izao fotoana izao, ny fampahalalana rehetra misy dia manondro fa fanafihana ny vahoaka sivily eo an-toerana izany. Tsy i Virunga Park Rangers no lasibatry ny herisetra fa namoy ny ainy noho ny fanafihana ny fiarovana ny mponina teny an-toerana. Andro manimba ho an'ny Valan-javaboarin'i Virunga sy ireo vondrom-piarahamonina manodidina azy io.
Ny eritreritsika dia miaraka amin'ireo fianakaviana sy sakaizan'ireo niharam-boina rehetra ary koa ireo naratra, ny sasany amin'izy ireo dia miady ho an'ny fahavelomany.
Valan-javaboary Virunga dia valan-javaboary ao amin'ny Lohasahan'i Albertine Rift any amin'ny faritra atsinanan'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo. Izy io dia noforonina tamin'ny 1925 ary anisan'ny faritra arovana voalohany aty Afrika. Raha haavo dia 680 m eo amin'ny lohasahan'ny Renirano Semliki ka hatramin'ny 5,109 m ao amin'ny Tendrombohitra Rwenzori no misy azy.
Ny tranokala voatanisa UNESCO dia miparitaka mihoatra ny 7,800 kilometatra toradroa (3,000 kilaometatra toradroa) manerana ny sisin-tanin'i DR Congo, Rwanda, ary Oganda.
Izy io dia trano onenan'ireo gorila an-tendrombohitra malaza eran-tany saingy tratry ny tsy fandriam-pahalemana sy herisetra mihombo.
Nosokafana tamin'ny 1925, ny valan-javaboary dia nanatri-maso fanafihana miverimberina nataon'ny vondrona mpikomy, milisy ary mpihaza.
Nahatratra 176 ny mpiambina azy no maty tao anatin'ny 20 taona lasas Tamin'ny fanafihana iray hafa, tany amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny Ituri ny alakamisy, sivily fito no matin'ny milisy.
Ny loharanom-baovao dia nanome tsiny fa ny fanafihana ireo mpikambana ao amin'ny CODECO - izay ny anarany ofisialy dia Koperativa ho an'ny fampandrosoana an'i Kongo - sekta ara-pinoana ara-politika mitam-piadiana ao Ituri nalaina avy tamin'ny foko Lendu.
Cuthbert Ncube, filohan'ny Birao fizahantany afrikanina nanameloka ny fanafihana ary nampifandray ny fiaraha-miory amin'ny fianakavian'ireo niharam-boina.
Ny vina hoavin'ny fizahan-tany Pattaya
SkyWest dia mahazo $ 438 tapitrisa fanohanana karama amin'ny lalàna CARES